Waxaad ka heli telefoonka dhaldhalaalaan cusub, laakiin waxay kaga Tagayaan Gadaashoodana alaabtayda oo muhiim ah ee aad taleefan jir? Waa arrin xanuun weyn oo xogta ka mid phone wareejiyo kale, gaar ahaan marka telefoonada socda nidaamyada hawlgalka mobile kala duwan. Haddii aad tahay qof cilmi qaar laga daadiyo kala iibsiga telefoonka, aad tahay meel sax ah. Maqaalkani waxa uu muujinayaa inaad hogaanka 7-ada kala iibsiga phone in la sameeyo xogta kala iibsiga effortlessly.
3. Motorola haajiraan
4. LG kaabta
Transfer Mobile 5. Xperia ™
Sida magacaba ka muuqata, Samsung Smart Switch loo abuuray in ay xogta ka phone hore lagu wareejiyo si aad u casriga ah Samsung Galaxy. Content u wareejin karaan waxaa ka mid ah xiriirada, fariimaha, photos, music, qoraalo, videos, jadwalka iyo aad u badan, waana kala duwan oo ku salaysan telefoonka jir.
Transfer ka ah iPhone:
Way: iCloud hayaan in ka badan WiFi ama network side
Content: xiriirada, sawiro, abuse wac, dhacdooyinka taariikheed, qaylo, goobaha WiFi, bookmark browser iyo app liiska.
Transfer ka aalad Android:
Jidka:. In ka badan WiFi
Tutorial: saar 2 qalabka Android 10 cm. Fur barnaamijyadooda Switch Smart labada qalabka Android, iyo dooratid content doonayay in lagu wareejiyo.
OS: Qalabka Android il waddaa Android 4.0 ama ilaa.
Your qalab cusub Android waddaa Android 4.1.2 ama ka dib.
HTC Transfer Tool waa app ah si gaar ah loogu kala iibsiga telefoonka inuu u dhaqaaqo content ka hore HTC telefoonka ama telefoon kale ee Android in aad HTC Mid ka mid cusub. Waxay ka dhigaysa mid aad u fudud oo si sahlan ay u guuraan xiriirada, fariimaha, video, jadwalka taariikhda, photos, music, Bookmarks, wallpapers iyo goobaha bandhigay.
Taageerayaan qalabka Android:
• Transfer ka (phone jir): qalabka Android ordaya 2.3 ama ka dib.
• Transfer in (telefoon cusub): HTC Mid ka mid ah
Baro wax badan oo ku saabsan Tool Transfer HTC >>
Just iska ilaawaan telefoonka jir iyo tayeynta in Moto G? Motorola haajiraan waa app xaq saxda ah ee aad u. Iyada oo ay taasi fududahay app kala iibsiga telefoonka, waxaad u haajiraan karaan xogta si aad Motorola phone cusub ka telefoonka ah Android, a-smartphone oo aan la Bluetooth, iyo iCloud.
OS: Android 2.2 ama ka dib
Content kuu soo gudbin karaa: xiriirada SIM, sawiro, taariikhda qoraalka, soo wac taariikhda, videos
Bedelka ka ahayn casriga ah:
Non casriga ah: a-smartphone oo aan la Bluetooth
Content kuu soo gudbin karaa: Xiriir
Bedelka ka iPhone via iCloud:
Content kuu soo gudbin karaa, xiriirada iyo jadwalka
Baro wax badan oo ku saabsan Motorola haajiraan >>
Sida wareejinta xogta telefoonka Apps kor ku xusan, ee kaabta LG waxaa loo isticmaalaa si ay u gudbiyaan xogta ka phone Android jir ah oo kiniin ah in aad G2 cusub LG, G3 iyo meelo ka baxsan. Iyada oo ay caawimaad, waxaad tahay dhaqaajin karin fariimaha, xiriirada, jadwalka taariikhda, Bookmarks, sawiro, videos, document files, qoraal codka iyo sidoo kale music.
Qalabka Android ay taageerayaan:
• Transfer ka (phone jir):. qalabka Android ordaya 2.3 ama ka dib
• Transfer in (telefoon cusub): G2 LG iyo meelo ka baxsan.
Badan oo ku saabsan kaabta LG Baro >>
Aad dhib ku files ka telefoonka ah oo gaboobay wareejiyo si aad telefoon Sony Xperia? Isdeji. Xperia ™ Transfer Mobile yimaado aad u. Waa app ah aalladda-fudud oo fudud oo xogta telefoonka kala iibsiga, kaasi oo caawinaya in aad nuqulka xiriirada, SMS, MMS, jadwalka taariikhda, qoraalo, music, video, waraaqaha iyo ka badan oo ka jir smartphone Android, iPhone, iPad, iPod taabashada iyo Windows Phones in aad telefoonada Sony Xperia cusub.
Transfer ka casriga jir:
• 4.0 Android ama ka dib. Aan ku xaddidnayn casriga ah Sony.
• iPhone, iPad iyo iPod Touch socda macruufka 4.0 ama ka dib.
• Windows Phone 8.0 iyo ka dib.
• Sony Xperia telefoonada ordaya 4.3 Android ama ka dib.
Baro wax badan oo ku saabsan Xperia ™ Mobile Transfer >>
Sida aad ogtahay, telefoon kasta app kala iibsiga kor ku xusan ku eg tahay mid soo saaraha Android. Maxaa dhacaya haddii aadan rabin in aad isticmaasho app sida, oo aad doonayso si aad u hesho telefoonka wejiyo in app kala iibsiga telefoonka? Waxaa jira yimaado SHAREit. Waxaa la arkaa in ay tahay hab dhaqsiyaha badan dunida ee ay sawiro, barnaamijyadooda, videos, music, files document iyo xidhiidhka ka dhexeeya telefoonada Android, qalab macruufka iyo Windows PC. Waxa ay meesha baahida loo qabo in fiilooyinka USB in wirelessly wareejiyo content. All inaad samayso waa inaad kala soo baxdo iyo rakibi SHAREit on telefoonada aad rabto in lagu wareejiyo xogta. Phones la SHAREit si toos ah midba midka kale ka heli doontaa marka ay kala duwan.
Baro wax badan oo ku saabsan SHAREit >>
> Resource > Apps > Top 6 Transfer Phone Apps si ay u gudbiyaan Data muuqan